विश्वकै सबैभन्दा प्यारी इरानकी बालिका अनाहिता कोरोनाभाइरस संक्रमित भएकै हुन् ? – Online Nepal
विश्वकै सबैभन्दा प्यारी इरानकी बालिका अनाहिता कोरोनाभाइरस संक्रमित भएकै हुन् ?
April 12, 2020 614
काठमाडौं। ४ वर्षकी बालिका अनाहिता हशमजादेहलाई विश्वकै सबैभन्दा प्यारी बालिका भनिन्छ । उनकी आमा मरियमले २०१८ मा पहिलो पटक उनको एउटा फोटो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी थिइन् । त्यसपछि नै अनाहिताका तस्वीरहरु भाइरस हुन सुरु भएका थिए । इन्स्टाग्राममा अनाहिताको नामका धेरै अकाउण्टहरु छन् । उनको आधिकारिक इन्स्टाग्राम अकाउण्टमा ९ लाख ८४ हजारभन्दा धेरै फलोअर छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा फर्जी दावी गर्ने सिलसिला जारी छ । यरी हल्ला फैलाउनेहरुले यी बालिकालाई पनि छोडेनन् । उनीहरुले यी बालिकालाई पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको हल्ला फैलाइदिए । यो खबर भाइरल हुनासाथ उनका इन्स्टाग्राम फ्यानहरु चिन्तित भए र यसबारे सोध्न थाले । फ्यानको यो प्रश्नमा उनकी आमा मरियमले जवाफ दिँदै उनी स्वस्थ र सुरक्षित भएको बताएकी छिन् ।
अनाहिता इरानको सफहानकी हुन् । अत्यन्तै आकर्षक मुस्कान, नीला आँखा र सुन्दर मुहारका कारण फ्यानहरु उनलाई विश्वकै ‘क्युट’ बालिका भन्छन् । उनी १० जनवरी २०१६ मा जन्मिएकी हुन् । २०१८ मा उनकी आमा मरियमले पहिलो पटक उनको फोटो इन्टरनेटमा पोस्ट गरेकी थिइन् । फोटो सार्वजनिक भएसँगै उनी इन्टरनेट सेन्सेसन बनेकी थिइन् । त्यसपछि मरियकले अनाहिताका फोटोहरु शेयर गरिरहन्छिन् ।
Prevनेपालका मस्जिदमा लुकेका २४ भारतीय प्रहरी नियन्त्रणमा, ३ जना जाँच्दा ३ वटै पोजेटिभ : आजतक
Nextज्योतिष शास्त्रअनुसार कुन बार जन्मिने मानिस कति भाग्यमानी ?
पारसले आफ्नो सम्बन्ध बारे यसो भने
अर्जुनको श्रीमान् श्रीमतीको को भयो एस्तो बार्ता,हुने भयो मिलन फेरी ? (हेर्नुहोस भिडियो)
खुसीको खबर: भोलि देखि सार्वजनिक यातायात पनि चल्ने, यस्तो छ नीतिनियम
मध्यरातमा भएको कार दुर्घटनामा पत्रकार पाण्डेको दुःखद मृ*त्यु